Abiy Ahmed muxuu maanta Itobiya u sheegayaa. | ogaden24
Abiy Ahmed muxuu maanta Itobiya u sheegayaa.
Xaalada Amni iyo siyaasadeed ee Itobiya oo Gabi ahaan Faraha kabaxday ayaa Ra’iisal wasaraha Itobiya ku Khasabtay inuu maanta Qabto shir Jaraa’id oo uu kula Hadlayo dadwaynaha kagana warbixinayo xaalada dalka.
Sida warbaahinta dawladu kasoo xigtay xafiiska Ra’iisal wasaraha shirka Jaraa’id ayuu Abiy diirada kusaarayaa Kacdoonka Qomiyada Oromada iyo caasimadii Addis ababa oo marka laga Yimaado Kacdoonka uu buux dhaafiyay Hub 4-ta Jiha kaga socda.
Amaankii Guud ee Gabi ahaan Itobiya ayaa u muuqda mid Faraha kasii-baxaya gaar ahaan mana jirto Hal meel ah oo maanta xasilooni Laysku Halayn karo ay Kajirto, marka laga reebo wadanka Ogadenia oo mamulka DDS Jabhada iyo shacabku Gacmaha is Qabsadeen, balse wixii kale ee Itobiya Laysku dhihi Jiray oo ay ugu Horeeyaan, Addis ababa, dhulka Oromada, xadka Tigreega & Xabashida, shucuubta Konfureed iyo Ben Shangulka ayaa baaxaa dagaya.
Marka laga Yimaado Kacdoonka Oromada iyo amniga Guud ee dalka ayaa waxaa lagu wadaa inuu kahadlo arimaha siyaasada iyo is badalada cusub ee soo Kordhay oo ay ugu Horeeyaan is casilaada madaxwaynihii Amxarada, kaasi oo lagu Eedeeyay inuu Gacan-saar la leeyahay xisbiga OPD-da Oromada, waxayna is casilaadaasi dharbaaxo culus kunoqotay Abiy Ahmed.
Shirka Jaraa’id ee Abiy Ahmed ayaa waxaa barbar soconaya mudaharaadkii ugu balaadhnaa oo maanta kadhacaya Addis ababa iyo dhamaan dhulka Oromada, kaasi oo looga soo Horjeedo Guryaha Bakhtiya Nasiibka uu kubixinayo mamulka magalada Addis ababa.